တရုတ် Checkpiont သတ္တု Detector, ဆွဲငင်အားသတ္တု Detector, သတ္တု Detector ထုတ်လုပ်သူ Check
ဖေါ်ပြချက်:Checkpiont သတ္တု Detector,မုတ်အောက်ရှိလမ်းသတ္တု detectors Check,ဆွဲငင်အားသတ္တု Detector,သတ္တု Detector Check,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > သတ္တု Detector မှတဆင့် Walk > Checkpiont သတ္တု Detector
Checkpiont သတ္တု Detector ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Checkpiont သတ္တု Detector, မုတ်အောက်ရှိလမ်းသတ္တု detectors Check ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ဆွဲငင်အားသတ္တု Detector R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
အဆောက်အဦးအပြင်အသုံးပြုမှုမုတ်အောက်ရှိလမ်းသတ္တု detector တံခါးဝ (PD-3000)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သတ္တု detector (JT-200) မှတဆင့်မိုးလုံလေလုံအသုံးပြုမှု Walk  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ခြောက်လဇုန် Checkpiont သတ္တု detector  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
metal detector လုံခြုံရေးတံခါးများ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လုံခြုံရေးအဘို့အစက်သတ္တု detector  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လုံခြုံရေး Prospector သတ္တု detector  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လုံခြုံရေး metal detector သိထား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
tutti နှုန်း metal detector  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တံခါးဝကတဆင့်သတ္တုလမ်းလျှောက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လုံခြုံရေး Excalibur သတ္တု detector  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လုံခြုံရေး Safeline သတ္တု detector  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကျေးဇူးမုဆိုးသတ္တု detector ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သတ္တု detector ရခြင်း (MS-3006)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လုံခြုံရေးသတ္တု detectors အ (MS-3006)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လုံခြုံရေးအစမ်းလေ့ကျင့်မှုများသတ္တု detector တံခါးဝ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သတ္တု detector မှတဆင့်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလမ်းလျှောက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သတ္တု detector မှတဆင့်လုံခြုံရေးလမ်းလျှောက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အနီအောက်ရောင်ခြည်ဗျူဟာလမ်းညွှန်သတ္တု detector တံခါးဝ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
LCD ကိုဗျူဟာလမ်းညွှန်သတ္တု detector တံခါးဝ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သတ္တု detector မှတဆင့်ပြင်ပလမ်းလျှောက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သွေးခုန်နှုန်းသော induction ဗျူဟာလမ်းညွှန်သတ္တု detector တံခါးဝ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အဆောက်အဦးအပြင်အသုံးပြုမှုမုတ်အောက်ရှိလမ်းသတ္တု detector တံခါးဝ (PD-3000)
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 360 / Set/Sets
အလင်းအိမ်နှင့်အတူ6ဇုန် - ရေစိုခံလမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector အဆိုပါ PD-3000 လုံခြုံရေးတံခါးကိုပို့ကုန်များအတွက်သတ္တုထောက်လှမ်းလုံခြုံရေးတံခါးကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရေစိုခံ, fireproof တံခါးကို panel ကိုရေစိုခံခြင်းနှင့် fireproof...
သတ္တု detector (JT-200) မှတဆင့်မိုးလုံလေလုံအသုံးပြုမှု Walk
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 320 / Set/Sets
အလင်းအိမ်နှင့်အတူ6ဇုန် - ဗျူဟာလမ်းညွှန်သတ္တု detector ဒါကကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောဘေးကင်းလုံခြုံမှုစစ်ဆေးရေးတံခါးကိုဖြစ်ပါတယ်။ တံခါးကိုဖွဲ့စည်းပုံအားဖြင့်ရှောက်သွားနိုင်မယ့်တံခါးကိုပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပါတယ်။ တံခါးကိုအပေါ်နှစ်ခုကော်လံနှိုးဆော်သံက...
ခြောက်လဇုန် Checkpiont သတ္တု detector
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 300 / Set/Sets
MS-2006 ခြောက်ဇုန်စံဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector (ငွေ & မီးခိုးရောင်) ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း: ဗျူဟာလမ်းညွှန်သတ္တု detector ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်, သူတို့သည်သစ်သားရောထွေးဘုတ်အဖွဲ့ဟုခေါ်ဝေါ်ကြသည်,...
metal detector လုံခြုံရေးတံခါးများ
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 287 / Set/Sets
Supply နိုင်ခြင်း: 980Sets/Month, 8 days
MS-1006 ခြောက်လဇုန်လက်တွေ့ကျတဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector (ငွေ & မီးခိုးရောင်) ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း: တစ်မုတ်အောက်ရှိလမ်းသတ္တု detector ၏သီအိုရီကဘာလဲ? ယေဘုယျအားဖြင့်လျှပ်စစ်ရဖို့ Socket မှ plug ကသတ္တု Pass...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 365 / Set/Sets
MS-3006 ခြောက်လဇုန်ရေအထောက်အထားဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector (ငွေ & မီးခိုးရောင်) ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း: တဖြည်းဖြည်းနဲ့, သတ္တု detector တံခါးဝစျေးကွက်၏တောင်းဆိုချက်ကြောင့်သေးငယ်ပေါ့ပါးဖြစ်လာဗျူဟာလမ်းညွှန်။ People...
လုံခြုံရေး metal detector သိထား
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 373 / Set/Sets
MS-6006 ခြောက်လဇုန်ချွေ LCD ကိုလမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector ဒစ်ဂျစ်တယ်သတ္တု detector တံခါးဝကတဆင့်သတ္တုလမ်းလျှောက် pi သတ္တု detector အကောင်းဆုံး rated သတ္တု detectors အ ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း: ဗျူဟာလမ်းညွှန်သတ္တု detector ထိုကဲ့သို့သောဓါတ်ရောင်ခြည်,...
လုံခြုံရေး Excalibur သတ္တု detector
MS-6006 ခြောက်လဇုန်ချွေ LCD ကိုလမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector သတ္တုစကင်နာ Fisher f75 သတ္တု detector garrett သတ္တု detector ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း excalibur သတ္တု detector ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း: ဗျူဟာလမ်းညွှန်သတ္တု detector ထိုကဲ့သို့သောဓါတ်ရောင်ခြည်,...
MS-6006 ခြောက်လဇုန်ချွေ LCD ကိုလမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း: သတ္တု detector circuit ကို safeline သတ္တု detector garrett PD 6500i သတ္တု detector ကိရိယာအစုံ ဗျူဟာလမ်းညွှန်သတ္တု detector ထိုကဲ့သို့သောဓါတ်ရောင်ခြည်,...
MS-6006 ခြောက်လဇုန်ချွေ LCD ကိုလမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း: ဗျူဟာလမ်းညွှန်သတ္တု detector ထိုကဲ့သို့သောဓါတ်ရောင်ခြည်, သံလိုက်သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကို elso...
သတ္တု detector ရခြင်း (MS-3006)
လုံခြုံရေးသတ္တု detectors အ (MS-3006)
လုံခြုံရေးအစမ်းလေ့ကျင့်မှုများသတ္တု detector တံခါးဝ
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 464 / Set/Sets
Supply နိုင်ခြင်း: 1700Sets/Month,4days
MS-8006 ခြောက်လဇုန်ရေအထောက်အထား LCD ကိုလမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း: ခြောက်လဇုန်ကျယ်ပြန့်လေဆိပ်, မီးရထားဘူတာရုံ, Mall, Supermarket အတွက်လျှောက်ထား, သတ္တု detectors အဗျူဟာလမ်းညွှန်။ အားလုံးသတ္တု detect နိုင်ပါသည်,...
သတ္တု detector မှတဆင့်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလမ်းလျှောက်
MS-8006 ခြောက်လဇုန်ရေအထောက်အထား LCD ကိုလမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း: ကြီးမားသောတံခါး, ပတ်ပတ်လည်မှတ်တိုင်တံခါးဝသို့မဟုတ်ခေါက်သိမ်းတံခါးဝများကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားသောအသွင်သဏ္ဌာန်နှင့်အတူဗျူဟာလမ်းညွှန်သတ္တု detector တံခါးဝ။...
သတ္တု detector မှတဆင့်လုံခြုံရေးလမ်းလျှောက်
MS-8006 ခြောက်လဇုန်ရေအထောက်အထား LCD ကိုလမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း: လူများတို့သည် sensitivity ကိုသိရန်လိုတဲ့အခါဗျူဟာလမ်းညွှန်သတ္တု detector တံခါးဝကိုအမြဲ 1 ယွမ်ယွမ်အကြွေစေ့တွေနဲ့စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဖြတ်သန်းတဲ့အခါအသံလျှင်,...
အနီအောက်ရောင်ခြည်ဗျူဟာလမ်းညွှန်သတ္တု detector တံခါးဝ
ထုပ်ပိုး: စက္ကူစက္ဏူထူ, သစ်သားအထုပ်, စင်သစ်သားအထုပ်, တစ်ဝက်သစ်သားအထုပ်။
MS-3006 ခြောက်လဇုန်ရေအထောက်အထားဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector (ငွေ & မီးခိုးရောင်) ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း: ဒါဟာချွေလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်စျေးပေါဖြစ်၏ အဓိကအားဖြင့်ယင်းသို့သောညဥ့်-ကလပ်သို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေရေး location.With...
LCD ကိုဗျူဟာလမ်းညွှန်သတ္တု detector တံခါးဝ
သတ္တု detector မှတဆင့်ပြင်ပလမ်းလျှောက်
သွေးခုန်နှုန်းသော induction ဗျူဟာလမ်းညွှန်သတ္တု detector တံခါးဝ
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 366 / Set/Sets
Supply နိုင်ခြင်း: 1300Sets/Month,2days
MS-3006 ခြောက်လဇုန်ရေအထောက်အထားဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector (ငွေ & မီးခိုးရောင်) ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း: တရုတ်မှာတော့ Foxconn က, BYD...
တရုတ်နိုင်ငံ Checkpiont သတ္တု Detector ပေးသွင်း
သငျသညျအစဉ်အမြဲပင်တရုတ်နိုင်ငံတွင် Foxconn က, BYD တူသောတချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ခုံးသတ္တု detectors အကျယ်ပြန့်အသုံးချနေကြတယ်, စိတ်တိုင်းကျ, လေဆိပ်, ဆိပ်ကမ်း, မီးရထားဘူတာရုံနှင့် metra ဘူတာရုံများကဲ့သို့အချို့သောစစ်ဆေးရေးဂိတ်များတွင်အချို့သောလမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ မုတ်အောက်ရှိလမ်းသတ္တု detector တံခါးဝကိုထိခိုက်ခံရခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအကြမ်းဖက်ဝါဒအားဖြင့်ပျက်စီးခံရခြင်းမှလူရဲ့အသက်တာကိုကာကွယ်ပေးသည်။ သတ္တု detector မှတဆင့်တရုတ်လမ်းလျှောက်စျေးပေါဒါပေမယ့်လည်းအသုံးပြုမှုအတွက်ကောင်းလှ၏။ နှင့်လည်းသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကတန်ဖိုးရှိ 1 နှစ်အာမခံ, ပူဇော်!
Checkpiont သတ္တု Detector မုတ်အောက်ရှိလမ်းသတ္တု detectors Check ဆွဲငင်အားသတ္တု Detector သတ္တု Detector Check pi သတ္တု Detector